Natraygroup | OSIM uLove2(Massage Chair)
Posted by natray natray | February 13, 2020	| WHATNEW |
စိတ်ကျေနပ်မှု ၂ ဆ ရရှိစေဖို့ ဆန်းသစ်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ပထမတန်းစား နှိပ်နယ်ခြင်း နည်းပညာများနဲ့ အဆင့်မြင့်မြင့် အပန်းဖြေ အနားယူနိုင်စေမယ့် OSIM uLove 2
အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲတာတဲ့ ၂၁ ရာစုနဲ့ အတူ OSIM မှ Customer များ အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန် မြန်ဆန်သော အနှိပ်ခံပရိုဂရမ်များ ခံစားရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး OSIM AI စမတ်နည်းပညာများကို uLove2Massage Chair မွာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်…
OSIM ရဲ့ တစ်ဦးတည်း မူပိုင် ၇၂၀ ဒီဂရီ roller Balls System
Intelligent V-Hand ™ Massage နည်းပညာ က ထိရောက်မှုရှိရှိနဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အနှိပ်ပညာရှင် တစ်ယောက် ဆုပ်ကိုင် နှိပ်နယ်ပေးသည့်အလား ခံစားရစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
720 ° roller ball များက လမ်းညွှန်နှစ်မျိုးလုံးတွင် ၃၆၀ ဒီဂရီကို direction နှစ်ဘက်လုံး လှည့်လည်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် တလျောက်လုံးကို ထိထိရောက်ရောက် နှိပ်နယ် ပေးတာ
ဖြစ်လို့ သာယာတဲ့ နှိပ်နယ်မှုကို ခံစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။
OSIM uLove2မှာပါဝင်တဲ့ 4-Hand Massage နည်းပညာဟာ ဆိုရင်ဖြင့် စွမ်းအားမြင့် Roller လေးစုံက အနှိပ်ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် နှစ်ယောက်က သင့်ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းနဲ့ အောက်ပိုင်းကို တပြိုင်နက် ဟန်ချက်ညီညီ အပြည့်အဝ ထပ်တူကျအောင် နှိပ်နယ်ပေးတာ ဖြစ်လို့ ထိရောက်မှုကို နှစ်ဆ ပိုမိုခံစား ရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်…။
ပထမတန်းစား 3D Surround Sound system နှင့်ကြိုးမဲ့ ဂီတဖွင့်နိုင်တဲ့ Bluetooth စနစ်ထည့်သွင်းထားခြင်း
uLove2မှာ ပါဝင်တဲ့ 3D အသံစနစ် စပီကာများက အကောင်းဆုံး ပဲ့တင် ရိုက်ခတ် ပေးတာ ဖြစ်လို့ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ကြည့်ရှုနေရသလို ကြည်လင် ပီသသော ပတ်ပတ်လည် အသံစနစ်က စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝ ခံစားရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခမ်းနားလှပလွန်းတဲ့ Ruby Red Color ကို အနက်ရောင်နှင့် အညိုရောင်ပေါ်မှာ အဆင်ဒီဇိုင်များ ပေါင်းစပ်ပြီး တန်ဖိုးကြီး ဇိမ်ခံ alligator skin နဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ဆန်းသစ်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော OSIM uLove2(Massage Chair) ဖြင့် ဇိမ်ကျသော အနှိပ်ခံခြင်းများကို နှစ်ဆတိုးလို့ အပြည့်အဝခံစားလိုက်ပါစို့…..
🏮HAPPY LUNAR NEW YEAR SALE🏮 🧧🎐🐭 အနေနဲ့
uLove2(Ruby Red) ကို အခု January လအတွင်း ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ Disount 10% အပြင် uSqueeze Hand Massager (Free) ကိုပါ ရရှိမှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းလေး ပါးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျ…
Casabella Luxury Home Furnishing Center
📍Casabella showroom in Yangon
22, Pyay Road ,9Mile, Yangon.
📞 01- 664363, 660769
📍Casabella showroom in Mandalay
Corner of 77 & 32 Street.
📞 02- 40 69366, 09 2062726
📍Casabella showroom in NayPyiTaw
Ocean supermarket, Ottaya Thiri, Ground Floor.
📞 09 73139698